ताली बजाउनुहोस्, यी रोगहरु भगाउनुहोस् – Gaule Media ::
Home/अन्य/ताली बजाउनुहोस्, यी रोगहरु भगाउनुहोस्
ramsharan१८ कार्तिक २०७४, शनिबार ११:१४
शीर्षक देखेर तपाईं हाँस्नुहुन्छ होला । तर, सही हो, ताली स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायी मानिन्छ । हामी सामान्यतः खुशी हुँदा या कसैको खुशीमा सामेल हुँदा या कसैलाई प्रोत्साहित गर्दा ताली बजाउछौं । तर, यसले मुटु, दम, फोक्सो, ग्याष्ट्रिक, मानसिक बेचैनी, टाउको दुख्नेजस्ता समस्यामा छुट्कारा पाउन सहयोग गर्छ । यसले रगतको प्रवाहलाई सुचारू गर्न मद्दत गर्छ । तर, खाना खाएको एक घण्टापछि ताली बजाउनुपर्छ । राम्रो परिणाम पाउनुछ भने हातमा नरिवलको या तोरीको तेल लगाउनुपर्छ, ताकि शरीरले सोसोस् ।
७. रोग प्रतिरोधी क्षमतामा वृद्धि : तालीले मानिसमा रोग प्रतिरोधी क्षमतामा वृद्धि गर्छ र कुनै पनि रोगसंग लड्न सक्ने बनाउछ ।
घरभाडा नतिरेको भन्दै पूर्वराष्ट्रपति रामवरणमाथि अपमान !, घरबेटीले निकाले १५ दिने नोटिश, साउनदेखि भाडा नतिरी जबरजस्ती बसेकाे घरबेटीकाे गुनासाे
२० कार्तिक २०७४, सोमबार ०६:५२
यसपटक पनि जनतालाई ढाँट्ने खालका दलका घोषणापत्र, भोट माग्नका लागि मात्रै हो राजनीति ?
१९ कार्तिक २०७४, आईतवार १४:१६
वैद्य माओवादीको घोषणापत्रः कांग्रेस, एमाले र माओवादी एउटै सिक्काको दुई पाटा
२२ कार्तिक २०७४, बुधबार ०४:०६